DHAKHAATIIRTA AAN XUDUUDDA LAHAYN/MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF) AYAA DAAWEYNAYA DHAAWACYO KA DIB MARKII XERO AY DEGGANAAYEEN DAD GUDAHA KU BAROKACAY LAGU DUQEEYEY KOONFURTA SOOMAALIYA - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
DHAKHAATIIRTA AAN XUDUUDDA LAHAYN/MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF) AYAA DAAWEYNAYA DHAAWACYO KA DIB MARKII XERO AY DEGGANAAYEEN DAD GUDAHA KU BAROKACAY LAGU DUQEEYEY KOONFURTA SOOMAALIYA
31.10.2011 | Qeybta Guud
NAYROOBI, 30 Oktoobar 2011 – Shaqaalaha MSF ee jooga Mareerrey oo ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose, ee koonfurta Soomaaliya, ayaa daaweynaya dersinno dad dhaawacmey ka dib markii duqeymo ay dayaarado u geysteen magaalada jilib ay ku dhaceen xero dadka gudaha ku barokacay ay degganaayeen abbaarihii 7 saac iyo bar duhurnimo (1.30 pm) maalintii Axadda ahayd. Waqtiga war saxaafadeedkan la qorayo ugu yaraan 3 qof ayaa la sheegey in ay dhinteen iyo 52 dhaawacmey, dadkaas oo badidoodu yihiin haween iyo carruur. MSF ayaa dhaawacyada u qaadeysa cusbitaalka Mareerrey si xaaladdooda loo dejiyo loona daaweeyo, waxaana laga yaabaa in hay’addu ay ku khasbanaato in dhaawacyada qaarkood ay u wareejiso goobo caafimaad oo kale maaddaama awoodda qalliin ee cusbitaalku ay kooban tahay.
Soomaaliya waxaa ku dhuftey dhibaatooyin bani’aadamnimo oo ba’an tan iyo bishii Maajo sanadkaan, waxaana boqollaal kun oo qof ay u barokaceen rabshadda iyo abaarta daraaddood. Jilib waxaa ku nool ilaa 1500 qoys oo barokacayaal ah waxaana MSF ay siineysey daryeel caafimaad, oo uu ka mid yahay quudin ku-daweynta carruurta nafaqo-xumadu hayso. Ururku waxaa uu sidoo kale qaybiyaa alaabada gargaarka ee aasaasiga ah sida saabuun, saliidda wax lagu karsado, bustayaal iyo qalabka hoyga laga dhisto.
MSF waxaa ay dhammaan dhinacyada ku lug leh iskahorimaadka Soomaaliya ku tirtirsiineysaa in ay ixtiraamaan xuquuqaha dadka rayidka ah ee ku nool meelaha uu iskahorimaadku ka jiro.
MSF waxa ay si joogto ah uga shaqeyneysay Soomaaliya tan iyo 1991-gii waxaana ay hadda dalka ka waddaa 13 mashruuc, oo ay ka mid yihiin adeegyo caafimaad oo xiriir la leh xaaladda degdegga ah ee hadda jirta iyo sidoo kale hawlo tallaal iyo kuwo nafaqo. Dhadhaab, Kenya, ayaa MSF ay hawlaheeda dib uga bilowdey sanadkii 2009, halka ay sidoo kale u adeegeyso Qaxootiga Soomaalid ah ee ku jira xerooyinka Doolow Addo, Itoobiya